Gawaarida guryuhu waxay Noloshaada ka dhigi doonaan mid sahlan iyadoo lala xariiro aaladda smart | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGawaarida Guryuhu waxay Noloshaada Ka Dhigi Doonaan Isgaadhsiinta Aaladda Smart
25 / 01 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY, VIDEOS
Gawaarida guryuhu waxay kuu fududayn doonaan noloshaada adoo la xiriiraya aaladaha smart
faahfaahinta Turkey ee mashruuca cusub ee ay sameeyeen ku automakers gudaha Baabuurta Initiative Group (TOGG) sii si ay u tagaan Forty. Fiidiyoow cusub oo ku saabsan sida muuqaalka ugu xiisaha badan ee loo yaqaan 'TOGG' ee ka shaqeeya howlaha xisaabaadka warbaahinta bulshada ayaa la daabacay.
ayaa lagu yiri bayaanka, "Iyada oo la xidhiidha # türkiyeninotomobil Joogta of technology, la xidhiidhka qalabka smart si aad nolol fudud oo aad ku siin doonaa meel nool cusub." Markaasuu wuxuu soo kaxaystay in hadalada.
Waxaan u qeexnay sida deegaanka noolaha ay aaladaha caqliga leh is dhexgalaan oo ay uhelaan qiimo.
Adeegsiga baahsan ee aaladaha ku xiran internetka sida casriga, telefishanka caqliga leh, alaabada casriga ah ee xariifka ah iyo xitaa shabakadaha caqliga badan, jawiga noolaha caqliga badan ee deegaankayaguna sidoo kale wuu sii fidayaa.
Gawaaridayada waxaan u meeleyn karnaa sida hage xarunta dhexe ee shabakadan cusub.
Ilaa hadda, internet-ka, halka gaariga Baabuurta Turkey la gaaray doonaa internet-ka.
Sidan, waxay noqon doontaa xiriir joogto ah oo lala yeesho dhammaan aaladda iyo nidaamyada ku xiri kara internetka.
Intaas waxaa sii dheer, markii la aasaasayo xiriirkan, macno malahan cidda bixisa aaladaha ama nidaamyada la isweydiinayo ama waxa ay yihiin.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad xakameyso aalad kasta ama nidaam kasta oo kugu xiri kara internetka meel fog, taasi waa, gaarigaaga.
Nidaamkan, kaas oo waliba kaa caawin doona, ayaa baran doona dhaqankaaga iyo baahiyahaaga wuxuuna kuu soo bandhigi doonaa duruufo caqli gal ah sida ugu habboon.
Markii aad ka tageysid gurigaaga, 'Dharku miyuu sii jiray? Miyaan damiyay iftiinka musqusha? Miyaan damiyey TV-ga? ' Astaamaha su'aasha ayaa ah sidaan oo kale kuma dhibayaan.
Sababta oo ah gaarigaagu wuxuu baran doonaa macluumaadkan, waxyar ka dib, markii aad gaarigaaga gasho oo aad wadada aado, waxay ku weydiineysaa: 'Qofna guriga ma joogaa, miyaad dooneysaa inaan hubiyo qalabka guriga oo aan bilaabo muuqaalka bixitaanka?'
Wuxuu kuu sameyn doonaa xaalad guri ka tegis ah wuxuuna xirayaa wax kasta oo aan ka shaqeynaynin guriga gadaashiisa isla waqtigaas.
Tusaalahani waa mid ka mid ah xaaladaha ugu macquulsan.
Waxaad awoodi doontaa inaad u abuurto duruufo gaar ah baabuurkaaga sidoo kale waxaad u abuuri kartaa xaalado.
Tareenka Shereflikoçhisar si loo fududeeyo iibinta milixda
Mashruuca Loogu Hagaajinayo Gaadiidka Degmada Alaşehir ee Manisa